Ihunanya-arọ na ha Famous Oge gboo music
Ihunanya-arọ e mara maka eke pụrụ iche na mbụ iberibe nke egwú ọrụ site ọkọ mgbe emetụ n'elu ọ bụla ikwọ na e mepụtara n'ihu ha. The àgwà gosiri ọdịiche Ihunanya music si ụdị ndị ọzọ nke music bụ ya ikike na-akpalite dị ike mmetụta uche. Ma n'ihi nke a ji mara ya kere a ọhụrụ na-ege ntị na-agbasa site na ya ụtọ n'afọ iri na ụma, ụtọ abụ olu ụtọ, na-adị jụụ kwekọrọ. N'ihi ya, ha e enwe mmasị n'ebe dị ka geniuses na egwú ụwa maka ndị kasị elu ogo nkenke egbu nakwa dị ka ha talent. Nyere n'okpuru ndị top iri Ihunanya-arọ ndị na-eguzo na nbata-uzọ nke Ihunanya oge ha na Famous Oge gboo Music.
Isaac Albeniz a mụrụ na 1860 na bụ Spanish pianist na dere na. Ọ bụ nwata prodigy onye mbụ arụmọrụ bụ na afọ anọ. Mbụ ya mejupụtara e bipụtara mgbe ọ dị afọ asatọ. Na site n'oge ọ bụ afọ 26 nke afọ enye ama dere n'elu 50 piano iberibe. Isiokwu nke otu n'ime ndị ya ikwọ Asturias na-webata 2008 egwu film gosipụtara omume. Albeniz kasị mma e Iberia dere n'oge ikpeazụ afọ nke ndụ ya. Ya masterpieces ndị na-esonụ.
Aulin a mụrụ na 1860 na Sweden na bụ otu nwanna nwanyị nke Tor Aulin. Ọ bụ eleghị anya, otu n'ime ole na ole nwanyị arọ nke oge ya. Aulin nne nne bụ onye magburu onwe pianist, ngosi na onye nkụzi na kụziiri ya piano. The aka ọha arụmọrụ site na Aulin bụ na 1880 ọnụ na nwanne ya nwoke na Brunns-salongen na Söderköping. N'etiti 1887 na 1901 Aulin nyere recitals na music nke ya. Ya kasị mkpa rụzuru bụ abụọ eriri quartets ha genre si 1880s. Ọ nwụrụ na afọ nke 68. Aulin kasị mkpa egwú ọrụ na-na-esonụ.
Gustave Charpentier, a mụrụ na 1860, bụ a French dere nke batara Paris Conservatoire na 1881. N'ihi na cantata Didon o meriri Prix de Rome ke 1887. The egwú ọrụ na ada Charpentier ukwuu tokwara bụ Louise. Na 1900 ọ nọ na ọdịda nke Legion d'honneur, ghọrọ a Ukwu mara na 1950, a Ọchịagha na n'afọ 1930. Mgbe ikpeazụ ya mejupụtara nke Julien ọ no na-agu ide music nnyocha, na-ahazi concerts na aiding merụrụ agha nke WWI. Charpentier bụ kasị mma -known maka ndị na-esonụ ọrụ.
Ebe ọ bụ na ụbọchị
Julien, ma ọ bụ ndụ nke a na-ede uri
Mahler, a mụrụ na 1860, bụ ihe Austrian mbubreyo-Ihunanya andiwet onye ihu ọha mbụ arụmọrụ bụ na afọ iri. Na 1881, ọ mụụrụ ya mbụ zuru-ọnụ ọgụgụ opera ahụ bụ Verdi si Il trovatore. Mahler mere ya New York mpụta mbụ na 1 January 1908 na Metropolitan Opera na Wagner si Tristan und Isolde. Ọ dọọrọ ihe onwunwe site ọtụtụ isi mmalite ya music dị ka cowbells na birdcalls ka na-akpalite ọdịdị na obodo, n'okporo ámá olu ụtọ, obodo-eze na bugle fanfares. Mahler nwụrụ na 1911 mgbe 260 egwú ụfọdụ nke bụ:
Bizet si Carmen
Songs nke a Wayfarer
The atọ Pintos
Mụrụ na 1860 na New York City Edward MacDowell, otu American andiwet kwagara France na na afọ 17 e kwetara na Paris egwú. Na 1888 MacDowell laghachiri United States. Na 1896, a họpụtara ya prọfesọ nke music na Columbia University. Na 1904 ọ nọ na-asọpụrụ otu n'etiti asaa mbụ America n'ime American Academy nke Arts na akwụkwọ ozi. Edward nwụrụ 1908 mgbe ata ahụhụ site na mgbaka. Taa ya na-esonụ ọrụ na-asọpụrụ site The MacDowell Colony na nwunye ya tọrọ ntọala.
Oké osimiri iberibe
Iji a Wild Rose
Mụrụ na 1860 na Slovenia Wolf, nwe obodo Ọstrịa dere bụ nwata prodigy onye malitere na-ewere piano na violin ihe na afọ anọ. Ya ọrụ ndụ ọ na-akpọ "Wild Wolf" n'ihi na ya yiri temperament na expressive ike nke ya nkwenkwe ma ya onwe ya amara akwụ ya ntị. Richard Wagner bụ Wolf kasị ukwuu egwú mmetụta na a kasị mara amara ya lieder na modeled mgbe ndị Robert Schumann na Franz Schubert. Mgbe mejupụtara nke ndị na-esonụ ọrụ ọ nwụrụ nke syphilitic ara na 1903 na a Vienna mgbapu.
Izu ike, ka ha zuru ike
Spanish n'akwụkwọ abụ
A pianist, a dere, a ndọrọ ndọrọ ọchịchị na a ọnụ na-ekwuru nke Polish onwe, Ignacy Jan Paderewski bụ mmasị na music ọbụna na a nnọọ n'oge afọ na mere ya egwú mpụta mbụ ke 1887 na nye ya oké ewu ewu. Ọ ghọrọ ụwa ama maka Minuet na G, op. 14/1. N'oge WWI ọ ghọrọ onye na-arụsi ọrụ ike so Polish National Kọmitii na mgbe agha a họpụtara dị ka Prime Minister nke Poland. Na 1922 ọ laghachiri n'obodo ya egwú ndụ. Ya egwú ọrụ na-agụnye ndị na-esonụ.
Symphony na B obere "Polonia"
A Russian dere na a pianist, Arensky ama ekewet songs na piano iberibe site n'oge ọ bụ itoolu. Mgbe composing na na gụsịrị akwụkwọ na Saint Petersburg Conservatory dị na 1882 ọ ghọrọ onye na prọfesọ na Moscow Conservatory ma laghachi Saint Petersburg dị ka onye nduzi nke Imperial n'elu. Arensky egwú ikwọ e mmetụta dị ukwuu site Pyotr Ilyich Tchaikovsky ma ọ bụ na ya kasị mma na ụlọ music. Ọ nwụrụ na afọ nke 44 nke ụkwara nta na a sanatorium na Poland mgbe composing ndị na-esonụ egwú ọrụ.
Ọdịiche na a isiokwu nke Tchaikovsky
Ijipt ehihie na abalị
The-adanye na mmiri, op. 61, cantata
Fantasia on Russian Folksongs
Ndị kasị mba ekele Grik dere Spyridon Samaras karịsịa enwe mmasị n'ebe ya usoro ihe nkiri. Mbụ ya opera Torpillae e premiered mgbe ọ bụ afọ 18 mgbe nke ọ ghọrọ ihe dị mkpa na ọnụ ọgụgụ na opera idaha. Ọ na-asọpụrụ maka ekewetde Olympic ukwe nke e ji mee mgbe ọ bụla Winter Olympics oghere ememe ebe 1960. Tupu ya anwụọ agadi 55 ọ malitere composing ikpeazụ ya opera Tigra ma na ọ dịghị mgbe okokụre. Samaras 'ogbo ọrụ na-popularly enwe mmasị n'ebe ụfọdụ nke na-na-esonụ.
Romance ma ọ bụ The biondinetta
Otu n'ime ndị kasị German-arọ nke oge ya Berger malitere egosi ihe ịrịba ama nke egwú mmasị na a nwata. Ọ mụụrụ ya mbụ egwu mgbe ọ bụ iri na anọ na afọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gara n'ihu ide ọtụtụ songs na-arụ ọrụ maka piano. Ya ide egwú na-egosi ekpomeekpo nke dissonant kwekọrọ na counterpoint usoro. Na 1903 e mere ka ọ a so German Royal Academy nke Arts na na-họpụtara 'Hofkanpellmeister' na Meiningen. Na-esonụ bụ ya kasị mkpa ọrụ.
Serenade iri na abụọ Wind Players, op. 102
Sonata na B isi
Anọ Fugues, op. 89
Ịmụ site obere biographies nke n'elu oké artists nakwa ka ha na egwú na-arụ ọrụ otu onye nwere ike ọ gaghị enyere ma nwee mmasị n'ebe ha maka mgbanwe kere site iwebata nke genre nke Ihunanya music n'ime ụwa nke a. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Ihunanya music nọ na-echere na-agbawa asunder site na ndị a omiiko artists. N'ezie, Ihunanya music teta a dormant uto, dị ka pụtara ìhè site ọtụtụ accolades na awards ndibọhọ, na e ọma natara site ọha na nnukwu na ogwe aka dum na-emeghe.
Download free ihunanya music na TuensGo si net
> Resource> Music> Top 10 Ihunanya-arọ na ha Famous Oge gboo music